कविता आफ्नै लागि ! | Hamro Biratnagar
गृह पेज विचार कविता आफ्नै लागि !
कविता आफ्नै लागि !
वि.संं २०१६ मा जन्मस्थान ओखलढुंगा जिल्ला माम्खा गाउँमा जन्मिनुभएका कवि बद्री भिखारी नेपाली कविता यात्राका कुशल साधक हुनुहुन्छ । एकचालीस बर्षे जागिरे जीवन बिताएर हाल अवकाशप्राप्त जीवन बिताउँदै गर्नुभएका कवि भिखारीसँग हाम्राे विराटनगर समाचार पाेर्टलका सम्पादक अभिमन्यु अभिजितले गर्नुभएकाे स्रस्टा र साहित्य साप्तहिक अङ्ककाे पहिलाे शृङ्खला
कवि भिखारीका हत्केला भरिका रेखाहरू ( मुक्तकसङ्ग्रह ) २०४३, माड्साबको झोला (२०५६) र समुद्र-साउती ( कवितासङ्ग्रह) २०७५ प्रकाशित छन् । नियात्रा र प्रिय अखडा ( निबन्धात्मक संस्मरण ) आमाको लय (अल्जाइमर रोगका लक्षण, बिरामीका दैनिक गतिविधि समेटिएको) आमाको दैनिकी प्रकाशाेन्मुख कृतिहरू हुन् ।
कविता विधामा परिचित हुनुहुन्छ। सबैले कवि भनेर चिन्छन्। कविता लेखनको पृष्ठभूमि कसरी सुरु भयो?
सुरुमा त कविता भनेर रामायण , महाभारत , देवीभागवतलाई बुझ्थेँ । पछि छ्त्तीस साल यता यसो लेख्दालेख्दै कविता भएछन्, जतिबेला छाप्न भनेर पत्रिकामा पठाउँथेँ । मैले कविताको सिद्धान्त पढेर, सूत्र पढेर कविता लेख्न थालेकै होइन । अरुले कविता भए भनेपछि मात्र कविता यसरी पनि लेखिदोरहेछ भन्ने लाग्यो ।
कविता कस्तो हुनुपर्ला? छत्तीस सालका कविता र अहिलेका कवितामा यहाँले अनुभव गर्नुभएको पृथकता के हो?
छत्तीस साल, नेपाली कवितामा एउटा आन्दोलन पनि हो । एक दलीय पन्चायतको बिरुद्ध कविहरू सडकमा आए, अठार बर्षको उत्पीडन, शोषण र दमित आवाजका विरुद्ध उकुसमुकुस भएको स्वर कवितामार्फत् मुखरित भएको हो । शासन शैलीका विरुद्ध सडकमा सुनिएका कविता छ्त्तीस उताका भन्दा पृथक् थिए । त्यो समय विज्ञान प्रविधिको पहुँच नभएको, विश्व परिवेशका बारेमा पत्रिका अथवा किताब पढ्नुबाहेक अन्यत्रबाट कमै थाहा पाएको समय, कविता पनि बिरोध, कुन्ठा, व्यङ्ग्य यही सेरोफेरोमा केन्द्रित थिए । अहिले विज्ञान प्रविधिले धेरै बिषयमा जानकारी दिएको छ, हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक छ । उतिबेला व्याख्या र वर्णन बढी भएजस्तो पनि लाग्छ । आजका कविता चित्रात्मक पनि लाग्छन् ! कविता पढ्दै जाँदा चित्र पनि आउनु आजका कविताको विशेषता हो कि ? जे होस् अहिले कविताले पनि सङ्घीयता, जातीय छुवाछुत, छाउपडी र बेरोजगारी, महिलामाथि हुने यौनशोषण जस्ता बिषयको उठान गर्दैछ, जुन कुरा त्यतिबेला दबाइएका थिए ।
[caption id="attachment_2888" align="alignnone" width="311"] तस्वीर- कविकाे फेसबुक खाताबाट[/caption]
तपाईँ जागिरे जीवन पनि बिताइसक्नु भएका कवि हुनुहुन्छ। पहिले र अहिलेका कविहरूको जीवनशैलीमा के फरक पाउनुहुन्छ? कविता लेखेर बाँच्न सकिन्छ?
त्यसै पनि कविताका किताब दुई तीन हजार प्रति छापिन्छन्, त्यति किताब बिक्री हुन बर्ष दिन पनि लाग्छ । प्रकाशक र बिक्रेता त्यसै पनि बाठा छन्, कति बिक्री भयो थाहै हुँदैन ।
पहिलेको तुलनामा अहिले कविता लेख्नेको संख्या धेरै बढेपनि कविताको स्तर घट्दो छ भनिन्छ। तपाईंलाई के लाग्छ?
भर्खरै राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको इहलिला समापन भयो। जातीय व्यवस्थाका पक्षधरहरू कवि घिमिरे कुलीन राजपरिवारका मात्र कवि थिए भन्ने खालको आरोप पनि लगाए। वास्तवमा कविले कविता कस्का लागि लेख्ने हो?
तपाईंका बारेमा 'छन्द बिरोधी' वा परम्परा नमान्ने भनेर आलोचना गर्नेहरू पनि छन्। उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ?
अन्तिममा, कविताकै परिवर्तित रूप पिरामिड/क्रिमुक/हाइकू जस्ता विधा भित्रिइसक्यो। यिनीहरूले कविताको सनातन स्वरूपलाई असर गर्ला कि नगर्ला?
अघिल्लो समाचारअर्थमन्त्री खतिवडाले दिए राजीनामा
अर्को समाचारइलामका एम्बुलेन्स चालकहरूलाई सम्मान
नमस्ते गर्ने कि नमस्कार?